To: सिलगडीले बल्ल एउटा यस्तो शालिक पायो
बी. पी. बजगाईं - भारतमा नेपाली मूलकाबाहेक उनीहरूसँग मिसिएर बस्ने अन्य जातिकाहरूले पनि यसलाई सम्पर्क भाषाका रूपमा चलाएका छन्। तर अहिलेको शिक्षा व्यवस्थाका कारणले अब आउने भावीपिढीले बिस्तारै नेपाली भाषा भुल्दै जाने/ प्रयोग कम गर्दै जाने आशंका बढेर गएको छ। अहिलेका युवा पुस्तामा नै 'मलाई त नेपाली भाषा ठ्याम्मै आउँदैन', '६५ भनेको कति हो?', 'नेपाली गीत त सुन्नै मनपर्दैन' जस्ता कुराहरू सुन्न पाइन्छ भने भविष्य कता जान्छ/जाँदैछ भन्ने कुरा गम्भीर विषय हो। यसको अर्थ हामीले अहिलेको प्रतिस्पर्धाका समयमा आफ्ना छोरा-छोरीलाई अंग्रेजी पाठशाला नपढाऊँ भन्ने होइन, तर आउने भविष्यलाई आफ्ना भाषाको जगेर्ना गर्न कसरी सिकाउँ भन्ने हो।
मायामा भावुक बनेर रोएको छैन
राजेश हमाल - सायद, मेरो पहिलो आकर्षण रसिया छँदा हो। म १४ वर्षको थिएँ, उनी १६ वर्षकी। मरिना नामकी उनी पोल्यान्डबाट आएकी थिइन्। उनैले मसँग परिचय गरिन्। त्यसपछि हामी एक महिनासम्म समरक्याम्पमा रह्यौं। मेरो पहिलो डेट पनि उनै हुन्। हामी एक महिनासम्म वाकमा जान्थ्यौं, समुद्री किनारमा गएर कुरा गथ्र्यौं। एकचोटी डान्समा जाँदा उनले मेरो सर्ट लगाएकी थिइन्, त्यतिबेला मलाई असाध्यै गर्व अनुभूति भएको थियो। आज मधुसँग बिहे भएको छ। मेरो कोही सपनाको राजकुमारी हो भने मधु नै हो।
सुविन भट्टराई - तीन महिना ठ्याक्कै भयो। हामीले मोबाइल नम्बर साटासाट गरेका थिएनौँ। कैलेकाँही म उनीहरुको त्यो डेटिङ स्पटमा एक्लै जाने गर्छु। संयोगले ऊसित भेट हुन्छ कि भनेर। तर, ऊ त्यहाँ म गएको समयमा कहिल्यै देखिएन। सायद, म नगएको समयमा ऊ आउँदो हो। या, यो पनि हुन सक्छ, त्यसपछि ऊ त्यहाँ कहिल्यै आएन।
जीवन क्षत्री - डाक्टर हुनुको एउटा फाइदा यो पनि होः एक वृद्ध छिमेकीले ज्यान बचाइदिएको भनेर खुब प्रशंसा र सत्कार गरिन्। पछि बल्ल मधुरो याद आयो वर्षौंपहिले, सायद एमबीबीएस अन्तिम वर्ष छँदा गाउँ आएको बेला मैले उनको उपचार गरेको थिएँ। ‘ज्यान बच्न लेखेको रहेछ र तिमी आयौ’, उनले भनिन्।
विपद् पछिको पुनर्निर्माणमा रडियो
आशा थापा - बीरबहादुर तामाङ जस्तै करोडौं मानिस हरेक दिन रेडियो सुन्छन्। युनेस्कोको आकंलनमा विश्वको ९५ प्रतिशत जनसंख्याले अझै रेडियोबाट सुचना लिन्छ। नेपालमा पनि ९० प्रतिशत जनसंख्याको पहँुचमा छ रेडियो। रेडियोप्रतिको यो आर्कषणलाई हेर्दा रेडियोले बजाउने कार्यक्रम र विषयवस्तुको समयानुकुल आवश्यकता अझ धेरै भएको बुझ्न सकिन्छ।
रमेश सायन - मार्केटरहरु सृजनशील हुन्छन्। उनीहरुको खोपडी निकै एक्टिभ हुन्छ। प्रत्येक मिनेट नयाँ कुरा सोच्न सक्छन्। स्मार्ट देखिन्छन्। आर्टिफिसियल हुन्छन्। मुस्कुराइरहन्छन्। देखाउनकै लागि भए पनि शानदार जिन्दगी बाँच्छन्। चलाख हुन्छन्। पहिला आफू तल परेजस्तो गर्छन्। भ्रम छर्छन्, त्यसपछि माथि चढ्छन्। म भूतपूर्व मार्केटर हुँ। यसकारण यी सबै कुरा सत्य हुन्। मैले भोगेको छु।
सुबिन भट्टराई - ‘तपाईंका पुस्तकहरु कति बिक्री हुन्छन्?’ उनको पहिलो प्रश्न। मैले नढाँटीकन जवाफ दिएँ, ‘यस्तै पचास हजार।’ उनी छक्क परे। फेरि सोधे, ‘नेपालको पपुलेसन कति छ?’ मेरो जवाफ सुनिसकेपछि उनले भने, ‘यति थोरै पपुलेसनमा यति धेरै किताब बिक्री हुन्छ?’ ‘किन दुर्जय? तपाईंहरुको हुन्न र?’ उनले वाइनको गिलासबाट एक घुट्का निले अनि भने, ‘किताब त धेरै बिक्री हुन्छ, तर हाम्रो पपुलेसन अनुसारको कहाँ हुन्छ र?’ दुर्जयले अर्को प्रश्न फेरि मलाई गरे, ‘बाटामा हिँड्दा प्रशंसकहरु कति भेटिन्छन्?’ Comments
वनिता खनाल - नातिनीलाई स्कुलबाट ल्याउन हतार भयो भन्दै मदन दाइ छिटो निस्किन लाग्नुभयो। हामी उहाँका फ्यान थियौँ फोटो खिच्न तम्सियौँ। उहाँले आफ्नो कलामार्फत् दिलाएको हाँसोका फ्यान थियौँ हामी। बोल्दाबोल्दै पनि उहाँ हँसाउन भ्याइहाल्नुहुन्छ। उहाँले सुनाउने किस्सा पनि रमाइला हुन्छन्। तर, हिजो फोटो खिच्दा खिच्दै उहाँले यस्तो किस्सा सुनाउनु भयो, मेरो भक्कानो छुट्यो। 'मान्छेहरु, दाइलाई सन्चो छैन हो? भनि सोध्छन्। हो, बिरामी छु भन्छु, के भयो र? भनेर सोधिहाल्ने भए। पार्किन्सन्स भन्छु, अनि मुर्च्छा परेर हाँस्छन्, ठट्टा गर्‍यो भन्ठान्दा हुन्', उहाँले ठट्टाकै शैलीमा भनिहाल्नु भयो। पार्किन्सन्स भनेको के हो थाहा नहुनेलाई पो ठट्टा हुन्छ। दाइलाई के बित्दो हो? दाइको कुरा सुनेर मेरै मन भक्कानियो।
रामदेवी महर्जन - काठमाडौं उपत्यकामा हाइकिङ संस्कृति विकास भैसकेको छ। विदाका दिनमा वरपरका डाँडापाखामा भेटिन्छन् हाइकर्सहरु। प्रदुषणमुक्त ठाउँमा हिँड्दा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। साथै ग्रामिण परिबेश, गाउँले जनजिवन र नयाँ ठाउँ चिन्न सकिन्छ। सामान्यत ः एक दिन हिड्नुलाई हाइकिङ र एक भन्दा बढी दिन हिँड्नुलाई ट्रेकिङ भनिन्छ। हिमाललाई शीर बनाएर बसको काठमाडौं उपत्यकाको चारैतिर हरिया डाँडा छन्। जुनसुकै डाँडामा हिँडे पनि हुन्छ। काठमाडौ वरपर हाइकिङ गर्न मिल्ने केही रुटहरु
शम्भु सुस्केरा - प्रहरी संगठनको म्याच फिक्सिङ् रोक्न प्रहरी सेवा, सर्त र सुविधाका कुरा नियमावलीमा नभइ ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। हरेक प्रतियोगिता र प्रतिष्पर्धामा एउटा व्यक्ति मात्र प्रथम हुने प्राकृतिक नियममा धैर्य गर्न सकेको देखिएन। तसर्थ अब बन्ने प्रहरीको केन्द्र र प्रदेश संरचनामा वरिष्ठता, क्षमता, योग्यता, र आर्थिक अनुशासनका आधारमा सिनियर ब्याचको एकलाई प्रमुख नियुक्त गरी अरुलाई स्वतः अवकास दिने ऐनको व्यस्था नभए प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमाण्ड होईन आजका तीन इन्द्रहरुको जस्तै ‘चेन अफ पानी बाराबार’ रहिरहनेछ। यसको असर जवानसम्मै ठोक्किन्छ।
जनयुद्धका ज्युँदा शहीद
अन्जना केसी - ‘अर्घाखाँचीको कारबाहीपछि सेनाले गाउँ–गाउँ अप्रेशन गर्‍यो त्यही बेला तपाईँको घरमा पनि गएर तपाईँको बुवा र बहिनीलाई लिएर हिँड्यो। बुवाको खबर अहिलेसम्म केही थाहा छैन। बहिनीलाई सेनाले बलात्कारपछि हत्या गरेर गाउँको जंगलमा फालेको रहेछ। ३ दिनपछि शव भेटिएको थियो। आमा ठीकै हुनुहुन्छ पार्टीको सम्पर्कमा।
शुरेश याक्सो - त्यो गोरु चुटाइ देखेर छक्क परें। आश्चर्य मानेको देखेर होला हवल्दारले म तिर हेर्दै भन्यो 'के गर्ने सर चोरलाई कबुल गराउने योभन्दा अरु उपाए नै छैन। तरिकै यै हो।' पटके चोर रहेछ। त्यही भएर हवल्दारले राम्ररी चिन्दोरहेछ। 'इन्स्पेक्टर साब अब हेर्नु है एल्लाई उकास्न एस्को बुढि आउछ। मोटी न मोटी ढोकाबाटै नछिर्ने छ' भन्दै प्रहरी निरिक्षकलाई सुनायो। निकैबेर पछि चार/पाँच ठाउँमा सही गर्न लगाएर मलाई जान भनियो। निस्कदै गर्दा अर्को ब्लकको जेलभित्र फलामको डन्डि छेऊमा बसेर चोरले चाउमिन मगाएर खाँदैरहेछ। त्यो दृस्य देखेर फिस्स हाँस उठ्यो। मनमनै लाग्यो चोर त पटके नै रहेछ बा।
जे सिकेँ, घुमेरै सिकेँ
भुवनहरि सिग्देल - मैले निकटबाट धनीका नाद र निर्धनका आक्रोश सुनेको छु। २०४२ सालको सार्क सम्मेलनको काम गर्दा महिनौंसम्म पाँचतारे होटेलमा बसेको छु म। त्यहाँको खानाले वाक्कदिक्क भएको छु। २०५६ सालदेखि २०६४ सालसम्म धादिङको चेपाङ बस्तीमा मैले काम गरेँ। तीसँग हिँड्दा मकैको च्याँख्ला पनि नभेटर स्कुस उसिनेर त्यसैले कैयौं छाक टारेको छु। दिनभरि तीसँग हिँड्दा कतै खाने कुरा नभेटेपछि नरबहादुर चेपाङले लक्ष्मण बुटी (घाँस) खोजेर खान दिएको हिजैजस्तो लाग्दै छ।
त्यो रन्जना र ती प्रेम ब्लैकी
विप्लव प्रतीक - एकथरि दुईचारवटा टिकट जोहो गरेर ‘एकको पाँच, एकको पाँच’ भन्दै कराउँदै हिड्थे। तिनीहरु अलिक ‘भस्मे डन’ पाराका हुन्थे। यस्ताहरुको पुलिससँग जहिल्यै लुकामारी चलिरहेको हुन्थ्यो। तर, जतिसुकै प्रहरीले लखेटे पनि उनीहरुको कारोबारमा खासै असर परेको जस्तो लाग्दैन थियो। प्रहरी पनि त्यहीँ रहन्थे, ब्लैकी पनि त्यहीँ बाँच्थे। यो बीचमा कुन सन्धि सम्झौताले काम गरेको हुन्थ्यो भन्ने कसैले बुझ्दैन थिए। ती भस्मेहरुले आफुसँग भएका टिकट कुनै तवरबाट बेचेरै छाड्थे र अर्को शो सुरु नहुन्जेलसम्मका निम्ति हलबाट लापता हुन्थे।
‘छोरी, तेरा अफिसकाले मिटर उल्टो घुमाएर पैसा खान्छन् रे’
–यमुना अर्याल - तिहारपछि एकाएक उपत्यका झिलिमिली हुँदा पोहोर, परारका वर्षमा अफिस हिँड्दा ऊ अफिस हिँडे लोडसेडिङका सन्तान भनेर छेड हान्ने छिमेकी नयाँ हाकिम आएपछि त चमत्कार नै भयो भन्दै नसुनिने गरी तारिफ गरेको सुनिन्थ्यो। जता पनि आफ्नो अफिसको तारिफ सुन्दा वाह भन्ने लाग्थ्यो। अहिले साथीभाइ, आफन्त चिनजानका जति नातेदार छन् सबैको फोन वा भेटमा पहिलो प्रश्न हुन्छ–तिमी मिटर घुमाउने शाखामा काम गर्ने हो कि होइन?
म किन जाउँ अमेरिका, लन्डन वा अष्ट्रेलिया?
विश्मिता ढकाल - म जसको हङकङ घुम्ने सपना थियो, उसले पहिले देश घुम्ने, संस्कृति बुझ्ने सोच लिएर फर्किंएँ। हो ती पश्चिमी मुलुकहरु भन्दा निकै फरक छ नेपाल। निकै सुन्दर त्यसै कारणले अब कितावको पानासँगै जिन्दगीको पाना निकै राम्ररी अध्ययन गर्ने सोच बोकेर शहर भित्रिएँ। अब कलेजका ग्रेडसिटका साथसाथै जिन्दगीका ग्रेडसिटमा पनि ए ल्याउने सपना बुनियो। त्यही पनि घुमेर देखेर अनि अनुभव गरेर। भनिन्छ नदेखेको उज्यालो भन्दा देखेको अध्यारोले जित्छ।
सुरेन्द्र राना (गुरिल्ला) - झट्ट हेर्दा केही देखिदैन पुरै ढुङ्गा जस्तो । तर त्यहाँ विभिन्न आकार प्रकारका बाजा थिए, सोही अनुरुप बज्थे । उनले बाजा चिनाउँदै क्रमशः ट्यामकुली, ढोलक बजाउन थाले। दमाह, ढोलक र ट्याम्कुली दुरुस्तै सुनीने । स्वयम् त्यो स्थानमा नपुगेसम्म पत्याउनै गाह्रो हुन्छ । एकछिन त मलाई पनि यो केही होईन जस्तो लाग्यो । त्यही ढुङ्गामा रहेको अर्को चुचुरो बजाए बजेन ढुङ्गाको ट्याक्क आवाज आयो । अनि ट्याम्कुली जस्तै देखिने ढुङ्गा बजाए दुरुस्तै ट्याम्कुली बज्यो । अनि पत्याउन कर लाग्यो ।
मरेर सहिद हुनेहरू, जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ
दण्डपाणि जैसी - हामीले आफ्नो ब्यक्तिगत उन्नति त प्रशस्तै गरेका छौं, नगरेको कहाँ हो र ? तर तपाईँले यहाँ देशको उन्नतिका बारेमा लेख्नु भएको हो । देशको उन्नति कस्ले गर्ने? तपाईँले २०१९ सालमा कविता लेख्दा देशका जनता यसरी देशै छोडेर बाहिरिएका थिएनन्। केही लाहुरे थिए तर उनीहरु आफ्नो गाउँ ठाउँलाई सम्झेर फर्की आएकै थिए। अहिलेको अवस्था फरक भइसकेको छ। उन्नति गर्ने पाखुरीहरु खाडी मुलुकमा संघर्ष गर्दैछन् र उता खिर्इ सकेपछि कोही काठका बाकसमा फर्किरहेका छन् भने कोही मुख र मुठी मात्र लिएर फर्की रहेका छन्। देशको विकास होला भनेर राज्यले अर्बौको लगानी गरी तयार पारेका अधिकांश दिमागहरु युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया तिर भासिइसके।
फेसबुकले जुराएको मेरो तन्नेरी प्रेमकथा
दीपज्योति थापा - भोलिपल्ट एसेप्ट गर्नेबित्तिकै म्यासेज ग¥यो, ‘तिम्रा आँखा साह्रै सुन्दर छन्।’ गाजल पोतिएका मेरा आँखालाई कसैले मृगनयनी भन्थे त कसैले मिनाक्षी। यो त सब भन्ने कुरा न हो...! सट्टामा म भन्ने गर्थेँ, यो त सिर्फ हेराइको कुरा न हो...! * उसले गर्लफ्रेन्ड छैन भन्यो, मैले पत्याइन। मैले ब्वाइफ्रेन्ड छैन भनेँ, उसले पत्याएन। * भ्रम नै सही! मैले बाँचीरहेको समय हो, फेसबुक। जहाँ दुरदराजमा रहेका मेरा शुभचिन्तक, मेरा आफन्तजन, साथीभाई र जीवनका कैयौँ पाटाहरु अटाएका छन्। र, त्यहीँ अटाएको छ मेरो तन्नेरी प्रेम ...
अर्काले के भन्ला भनेर नडराउ साथी
शितल दाहाल - एक जोडी केटाकेटी खुसीले विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन्, तब समाज औधी खुसी हुन्छ, आफन्तहरू भोजभतेर खाएर नाचगान नै गर्छन्, अनि त्यही जोडीले अब हामी सँगै बस्न नसक्ने भयौं, हामी छुट्टिएरै बढी खुसी हुन्छौं भन्छ, किन दुनियाँलाई त्यो अपाच्य हुन्छ? Comments
मुस्कान मिठो मिर्साको!
शुरेन्द्र राना - बिहान उठ्दा अन्नपूर्ण २ र ४ मुस्कराईरहेको थियो। करिब १५ मिनेटको बाटोमा रहेको भूमेथान(१६२० मि.) गयौ। जहाँबाट मिर्सा गाउ साह्रै सुन्दर देखियो। फर्किदा भेडी गोठ हुँदै गाउँ पुग्दा चिया र नास्ता तयार थियो। आमा समुहले बिदाई गर्नु भयो, हामी भने मिर्साको मिठो मुस्कान सम्झिदै ओरालो लाग्यौ।
चक्मकाउँदै गरेको जैदी
आरके अदिप्त गिरी - संसारले नयाँनयाँ आकार लिइरहेको बेला हाम्रा गाउँघरहरु किन अझँ पछि छन्, किन पछि पारिए? हाम्रा नेताहरुमा किन देश विकास गनुपर्छ भन्ने सोच पलाएन? आदि–आदि कुराले मलाई गाउँ पुग्दा पिरोल्छ। यस्ता अनेकन जिज्ञासा मलाई गाउँघरहरु डुल्दा हुन्छ। हाम्रा गाउँघरहरुलाई हामी बिर्सियौं भने, हामी कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। कारण, हामी सबैको अस्तित्व गाउँसँग जोडिएको छ भन्ने लाग्छ।
सिजेएमसी यात्राको चुनौतीपूर्ण १६ वर्ष
डा. मञ्जुश्री मिश्र - नेपालमै पहिलो पटक पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरी विद्यमान् पत्रकारिता शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्धेश्यल २०५७ सालमा कलेज अफ जर्नालिजम् एण्ड मास कम्युनिकेसन (सिजेएमसी) स्थापना भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २२ वर्षदेखि पत्रकारिता विषयमा स्नातक तह सञ्चालन गरिरहेको तर स्नातकोत्तर तह सुरु गर्न नसकेको अवस्थामा सिजेएमसीले काठमाडौंको धापासीबाट तीन कोठा भाडामा लिएर सुरु गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो। २०५८ साल पुष २७ गते वरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइराला, प्राध्यापक र सिजेएमसीका विद्यार्थीबाट सामूहिकरूपमा कलेजको उद्धघाटन भएको थियो।
कार्यसम्पादन ठूलो कि जागिर?
जीवन क्षत्री - ओली सरकार छँदै ज्ञवाली नेतृत्वको प्राधिकरणले कर्मचारी तान्न, धान्न र काम लगाउन नसक्ने पुष्टि भइसकेको थियो। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीप्रतिको वफादारीलाई केन्द्रमा राख्ने नगरेको भए ओलीले पहिले त ज्ञवालीभन्दा धेरै योग्य मानिसलाई प्राधिकरणमा ल्याउने थिए। भुलवश त्यस्तो मानिस नियुक्त भएको भए कार्य सम्पादन हेरेपछि फेरेर अर्को मानिस राख्ने थिए। Comments
माघीलाई मिलनको पर्व बनाउने कि फुटको?
शत्रुघन चौधरी - माघीको मौकामा मालिकहरू गाउँमा गएर गरिब, सोझा अभिभावकलाई ललाईफकाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर, वर्षको सिर्फ एकजोर कपडा दिएर वा एकदम न्यूनतम पैसा दिएर ५ देखि २० वर्ष सम्मका छोरीलाई आफ्नो घरायसी काम गर्नका लागि कमलरीको रूपमा लैजाने चलन थियो। कमलरीको नाउँमा हजारौं थारू चेलीवेटीहरूको विभिन्न तवरले शोषण हँुदै आएको छ। उनीहरू श्रम शोषण, यौन शोषणमा परी मानसिक पीडा भोग्दै विक्षिप्त अवस्थामा मालिकको घरमा नारकीय जीवन जिउन विवश छन्। कुनै न कुनै बहाना पारेर चेलीवटीलाई अझैसम्म कमलरी बनाउने काम हुँदै आएको छ। यसलाई रोक्न समाजका हरेक सचेत नागरिक लाग्नु जरुरी छ। साथै राज्य पक्षबाट यी सामाजिक विकृतिपूर्ण कुप्रथालाई हटाउनका लागि ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्दछ। तर उनीहरुले अझैसम्म कमलरी परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्।
पुरूष विरूद्ध हुने हिंसामा को हो जिम्मेवार?
अनिता न्यौपाने थपलिया - हजारौ सम्बन्ध टुट्नका लागि अदालतको ढोकामा पुगेका छन्। यस्ता घटनाहरुमा महिलाहरुलाई नै दोषि मान्ने जमात मात्र देखिएको छ यदि कसैले महिलाको पक्षमा बोल्ने हिम्मत गरि हाले पनि विदेशमा श्रीमान भएको अवस्थामा महिलाको पनि त शारीरिक आवश्यक्ता हो नि त भनि केही सस्तो सहानुभूती प्रर्दशन गर्न खोजेको देखिन्छ।
छोरो कहिले पाउने?
सविता विश्वकर्मा - बिहे हुनुभन्दा ठ्याक्कै हप्तादिन अघि, महिनावरी चल्दै थियो। हजुरआमाले मेरो हात समातेर भनेकी थिइन्–ब्या अघि नै पर सरी हालिस्, अब ज्वाइँको घर गएपछि सुरुमै एउटा पनाति पाइदिहालेस्, ढुक्कै हुन्छ।
हजुरबाले आइफोन चलाउन जानेनन् भनेर चिहान अगाडि सत्तोसराप गर्ने!
सन्तोष चिमरिया - यो सवालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आग्रह के हो स्पष्ट हुनुपर्छ। के पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरणको अभियान गलत थियो? के हामी बैइसे र चौबिसे नै ठिक थियौं? कि भारतीय उपमहाद्वीपका अरु राजा र रजौटालेझंै पृथ्वीनारायण शाहले पनि गोर्खा राज्य ब्रिटिस उपनिवेशलाई सुम्पनु पथ्र्यो र आज हामी भारतीय युनियन अन्तर्गत हुनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह हो?
त्रिविका विद्यार्थीमा शोधको सकस
– रुख गुरुङ - हालका वर्षमा स्नातकोत्तर तहका धेरै विषयका पाठ्यक्रम अन्यत्रका विश्वविद्यालयको भन्दा कमजोर नभएको दावी गरिन्छ। त्यो होला पनि। तर जतिसुकै राम्रो, “अप-टु-डेट” कोर्ष तयार गरे पनि कक्षाकोठाको पढाइले मात्र राम्रो शोध कार्य ननिस्कने कुरा छर्लंगै छ। शोधको महत्तालाई आत्मसात गरेर जबसम्म अहिलेको जस्तो कर्मकाण्डी शोध कार्यलाई सुधार गर्नेतर्फ प्रयत्न गरिँदैन तबसम्म “कपीपेस्ट” या “किनुवा” या “खेताला” या “चैते” थेसिसको उत्पादन त्रिविबाट भैरहन्छ।
अञ्जना के.सी. - ‘गम्भीर मलाई यहाँबाट उम्काएर एकान्तमा लैजाऊ। म आत्तिएकी छु, मकै जस्तै हाडीमा भुटभुटिएकी छु, तिमीले सल्काएको प्रेमको आगोमा दनदनी दन्किएकी छु। म यहाँबाट उम्किन चाहन्छु । प्लिज, मलाई यहाँबाट उम्काईदेऊ ।’